မြန်မာပြည်သူလူထု၏ ယနေ့ပြဿနာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » မြန်မာပြည်သူလူထု၏ ယနေ့ပြဿနာ
Posted by winkyawaung on Aug 28, 2010 in Myanma News | 8 comments
ညက မန္တလေးရတနာပုံနေပြည်တော်နေ့စဉ်သတင်းစာ ခေါ် http://myanmargazette.net ကျေးဇူးကြောင့် မြန်မာပြည်က စစ်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေ ရာထူးကထွက်ကုန်ပြီ ဆိုတာသိလိုက်ရပါတယ်။ ဘယ်သူ့ကိုမေးမေး ၀မ်းသာကြမှာပါ။ ဒါပေမဲ့..စစ်ယူနီဖောင်းတွေကိုချွတ်ပြီး လူဝတ်လဲကြမယ်။ အာဏာဆက်လက် ရရှိရေးအတွက် ပြည်သူတွေကို ညစ်ပတ်ပြီး ငါနဲ့ ငါမိသားစု ငါ့အမျိုးတွေ ငါ့တပည့်တွေ ကောင်းစားရေး ချမ်းသာရေးတွေကိုသာ အုပ်စုဖွဲ့ပြီး မတရားမှုတွေနဲ့ ရွေးချယ်ပွဲလုပ်ကြမယ်ဆိုတာကိုလည်း အများအသိပါ။
ကဲဒီလိုဆိုတော့ (ဘယ်သူတရားပျက်ပျက် ကိုယ်တရားမပျက်ပါနှင့်) ဆိုတဲ့စကားပုံအရ ကျွန်တော်တို့ ဘာဆက်လုပ်ကြရမည်လဲ?။ တချို့ကလည်း မဲမပေးပဲ သပိတ်မှောက်ကြပါ။ တချို့ကလည်း မဲပေးချင်တယ်.. ဘယ်သူကို ဘယ်ပါတီကို မဲပေးရမည်လဲ? ။ မနေ့က ကျွန်တော့်ဆီကို ပါတီတစ်ဖွဲ့ က လာကြတယ်။ သူတို့ကဘာပြောသလဲ ဆိုတော့ “ ကိုယ်ရင်တို့ ဟိုပါတီကြီးကတော့ အင်အားသုံးပြီး မတရားမှုများစွာနဲ့ စည်းရှုံးနေကြပါပြီ..ကျွန်တော်တို့ပါတီကို စိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုရင်တော့ မဲထည့်ပေးကြပါ” တဲ့။ ကျွန်တော်တို့ပါတီရဲ့ သတင်းကို ဂျာနယ်တွေမှာ ထည့်ပေးပါတဲ့။ ပြောပြီးပြန်သွားကြပါတယ်။ ဆရာလူထုဦးစိန်ဝင်း မေးခိုင်းတဲ့ “ခင်ဗျားတို့ ပါတီက ပြည်သူလူထုရဲ့ အကျိုးအတွက် ဘာတွေကို ဘယ်လောက် အတိုင်းအတာအထိဆောင်ရွက်ကြမှာလဲ?”။ ဆိုတာကိုတောင် မေးဖို့အချိန်မရလိုက်ပါဘူး။ ဟော တော်တော်ကြာတော့ ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်က (မယက)ဥက္ကဋ္ဌ ဆိုတဲ့အာဏာပိုင်က ကျွန်တော့ကို လာခေါ်ပြန်တယ်။ ရုံးရောက်တော့ “ခင်ဗျားတို့ စာနယ်ဇင်းက ဟိုတစ်နေ့က (…) ပါတီရုံးဖွင့်ပွဲကို သွားတယ်ဆို။ ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ ကျုပ်တို့မြို့နယ်အတွင်းမှာ ဘယ်ပါတီရဲ့ သတင်းကိုမှ မရေးကြပါနဲ့“။ “ခင်ဗျားတို့ကရေးလိုက်လို့ ကျုပ်ကိုအထက်ကမေးရင် မကောင်းဘူး” တဲ့။ “အထက်အကြီးအကဲများရဲ့ ဆန္ဒသည် ကျွန်တော့်အမိန့်ဖြစ်ပါတယ်” လို့ဆိုပြန်ပါတယ်။ ဒါစာနယ်ဇင်းက ပြဿနာပါ။ ပြည်သူတွေကို အလင်းရောင် အသိတရား အဖြစ်မှန်များကို တင်ပြပေးမဲ့ စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကို အမှောင်ချထားခြင်း ခံလိုက်ရတာပါ။
စောစောက အထက်မှာ နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများက စစ်ယူနီဖောင်းတွေချွတ် အာဏာကို အာသာငန်းငန်း မတရားယူဖို့ ကြံစီနေချိန်မှာ အောက်က ဌါနဆိုင်ရာတွေကလည်း လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကို ရတဲ့အချိန်ပိုင်းကလေးအတွင်းမှာ မတရားကိုယ်ကျိုးစီးပွားရှာနေကြပါပြီ..။ ခါးစီးပြီးခံနေရသူတွေမှာ အများပြည်သူလူထုကြီးပါ။ ယခုလို မြန်မာပြည်မှာ မိုးလေ၀သကမမှန် တောနေလူတန်းစားတွေက ကြပ်တည်းနေ၊ မြို့နေလူတန်းစားတွေကလည်း အရောင်းအ၀ယ်တွေကလည်းကျဆင်းပြီး စီးပွားရေးတွေက မကောင်းကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့ အမြတ်တော်ခွန်၊ စည်ပင်သာယာခွန်။ မီတာခွန်။ (ရယက)များရဲ့ ကိုယ်ထူ၊ ကိုယ်ထ ဘာကြေး၊ ညာကြေးတွေကလည်း တစ်ဆကနေ နှစ်ဆနှုန်းနဲ့ တစ်နှစ်ထက် တစ်နှစ်တိုးတိုးပြီးသာ ကောက်ခံနေတာကို ယနေ့လုပ်သားပြည်သူတွေခံနေကြရပါတယ်..။အခွန်သာများပြီး ရေနဲ့မီးကမလာတာ ကြာပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကို ရေလိုမီးရှားနိုင်ငံတော်ကြီးလို့သာ နာမည်ပြောင်းသင့်နေပါပြီဗျာ..။ ပြည်သူလူထုရဲ့ ပြသနာ အကြပ်အတည်းတွေကို ကယ်တင်ရှင်ကြီးသဖွယ်ဝင်လာသူတွေက လူဝတ်လဲ အာဏာရှင်များရဲ့ ပါတီကြီးဆိုတာ အများအသိပါ။ ဘာတဲ့ သူတို့ပါတီကို မက်လုံးအမျိုးမျိုးတွေကိုပေးပြီး အင်အားကြီးသထက်ကြီးအောင် စည်းရုံးနေကြပါပြီ။ ပြိုင်ဘက်ပါတီတွေကလည်း ပုလင်းတူဗူးဆို့ပါတီတွေများပြီး အခြားပါတီတွေရဲ့ အင်အား၊ အခွင့်အရေးတွေက တော်တော်လေးနည်းနေကြတာကိုလည်း အများအသိပါ။
ဒီတော့ မြန်မာပြည်ကပြည်သူလူထုကြီးရဲ့ အကြပ်အတည်းပြသနာများကို အမြန်ဖြေရှင်းပေးနိုင်မဲ့ နည်းလမ်းကို ရှာပေးကြစေလိုပါတယ်။ ဘယ်သူ့ကို အားကိုးပြီး ဘယ်ပါတီကို မဲပေးကြရပါမည်လဲ?..။ မန္တလေးရတနာပုံနေပြည်တော်နေ့စဉ်သတင်းစာ မှ ၀ိုင်းဝန်ကူညီလမ်းညွှန် အဖြေရှာပေးတော်မူကြပါလို့ မေတ္တာရပ်ခံလိုက်ပါရစေ…..။
တကြိမ် ခံရဖူးသူများကို စာနာပါသည်၊
သုံးကြိမ်အထက်ကိုတော့ အခံကြိုက်သူများလို့ ဆိုချင်ပါသည်၊
ဂျယ်ဝေါဟာရ အရဆိုရင်တော့ အပေးသမား bottom ပေါ့နော်။
ဟုတ်ပါတယ် … ဘယ်ပါတီက မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကို ဒီထက်ပိုကောင်းအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ မဲဆွယ်မှုတွေကို စုစည်းပြီးတော့ တင်ပေးစေချင်ပါတယ် …. ဒါမှဘယ်သူကိုမဲပေးရမလဲဆိုတာကို သိရမှာပါ …
ရေလိုမီးရှာနိုင်ငံတော်ကြီး တဲ့ ။ ကောင်းလိုက်တဲ့ နာမည် ၊ ထပ်ပြီးနောက်ထပ်ပေးလို့ ရသေးတယ် ၊ စာမျက်နှာမှာသာရှိပြီး တကယ်လက်တွေ့ မှာ အသုံးချလို့ အဆင်မပြေတဲ့ အသစ်တည်ဆောက်ပြုပြင်မှုကြီးတွေ ။
There is exactly an option,” We don’t know to whom we have to vote, but we do know to whom we must not vote . Yeah! the USDP, THE KYANT-PHUTT. Vote everyone other than them. That’s the answer.”
ဝေဖန်ချက်များအား ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ရေလိုမီးရှား နိုင်ငံတော်ပါ။ သတ်ပုံမှားနေတာတွေကို ခွင့်လွတ်ပေးကြပါရန် လေးစားစွာတောင်းပန်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျား..။
Thank you for sharing your experience with local authority. Please send this evidence to National League For Democracy and reputable NGOs. Any document, audio-visual evidence will be useful to criminalizing the Junta. Daw Suu had advise all citizens to use your voter`s Right. You and only you can decide whether to give vote or not. If someone whoever try to influence your decision, it is criminal act/ violation of voter`s right. If you are not sure who to vote because of NLD`s boycott, then boycott the election. Stay away from polling booths. That is what Daw Suu clearly mention to all the citizens. You all are eyes and ears of the country. Record all illegal activities of the Junta guys and report to authority. The authority I mean is not Junta`s guys. Authority I mean is NLD and reputable NGOs. My guess is most of the 3rd force guys are fulfilling Than Shwe`s 7-steps Militarization plan. Some of them got material gifts for participating in the unjust gamble of election; the gift they never been able to dream in their entire life. It is called Gravy Train. I am dead sure those who carry on with Than Shwe`s plan are traitors. We heard some leaders realized the dirty methods of Than Shwe and quickly withdrew from the election contest. Even if you vote some opposition, your vote will go into waste bins. The Junta got ready-made ballot boxes to replace your voted box. Your vote will be military vote. The best bet to save our country is to BOYCOTT THE ELECTION. The aim is to show the world Than Shwe`s election land-slide victory with NIL VOTERS AT POLLING BOOTH. Guinness world record of National Thief is Than Shwe, to name and shame him in the crowd.
တို့ကတော့ ချာပါတီ ပဲ စားတာ ကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်။ ချာပါတီပဲ ကြိုက်တယ်… ဟီးဟီး
ပါတီထွက်လာမှ မကောင်းတာပိုမြင်နေကြတာပါလား… ပြည်သူ့ညီလာခံတုန်းက တစ်လုံးမှပြောခွင့်မှရှိ တင်ပြခွင့်မရှိ… ဆန္ဒခံယူပွဲတုန်းကလည်းငြိမ်နေ… အခြေခံဥပဒေအတည်ပြု ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်လာတော့မှ နိုင်ငံရေးဆိုတာ ကိုမြင်လာကြတဲ့ ပါတီတွေကို ဘာသွားအားကိုးကြမလို့လဲ… အမြင်တွေပွင့်ကြပါတော့… နိုင်ငံရေး… ကိုယ့်အရေးကို စိတ်ဝင်စားကြပါ…